AwdalOnline - Gadabuursi Waa Inuu Talo Iyo Go’aan Adag Ka Qaato Shirka Isbahaysiga Laba Beelood Uga Socda Jabouti Ee lidiga Ku Ah Jiritaankiisa
You are here : Home » Saylac-Gobolka SALAL-Sacadiin » Gadabuursi Waa Inuu Talo Iyo Go’aan Adag Ka Qaato Shirka Isbahaysiga Laba Beelood Uga Socda Jabouti Ee lidiga Ku Ah Jiritaankiisa
Gadabuursi Waa Inuu Talo Iyo Go’aan Adag Ka Qaato Shirka Isbahaysiga Laba Beelood Uga Socda Jabouti Ee lidiga Ku Ah Jiritaankiisa
For AwdalOnline Updates admin On Saturday, January 26th 2013. Qeybta Wararka Saylac-Gobolka SALAL-Sacadiin Waxa ka socda Magaalada Jabouti Shir khatar ku ah Jiritaanka Qoomiyadda Gadabuursi shirkasi o ay horboodayaan labad beelood oo kala ah Sacad Muse (H/Awel) iyo Mamasan(Ciise ) iyagoo adeegsanaya awooddda dawladnimo ee ay labada reer Gacanta ku hayan ee Dawladda Jabuuti iyo Hargaysa oo ay kala mataalayan Wasiiro ,Talilayaal ciidan,Madaxda Sirdoonka ,Baayacmushtari ,Madaxda banka iyo dekadaha iyo aqoonyahan iyo Madaxdhaqameedyo ka yimid Ethopia dhawan iyo kuwo Hargaysa ka socda oo Jabourti u tagay tacsadii Ina xayd oo in muddo ahba iskaga dabqaadayey Hargaysa iyo Jabouti intii doorashadii dhacday ee Muranka Mayorka Saylac soo shaac baxay.
Arinta hadda dadka la maqashiinayaa ee Shirka Jabouti ,,waxa la baahiyey inay ku saabsantahay Muranka Mayorka Saylac oo socday 2 dii bilood ee udambeeyey ,,waxana todobadkan gudihii magaalada Saylac iskugu yimid ilaa Afar wasiir oo ay Saddex ay yihiin Sacad Muse ( Cadami ,Timcad iyo Samsam) waxa ka horeeyey wasiir Duur oo aha wasiirka ugu dhawaaday inuu arintan xal ka keeno ka dib markii uu ku qanciyey xildhibanadii aqlabiyadda helay ee beesha Samaroon inay walahood u ga tanasulaan mayor ku xigeenka.Arinkaas oo ay ka yeelen oo Wasiir duur waraysigii VOA ku sheegay in beesha Samaroon xildhibaanadoodi ay si GOBANIMO leh codsigii uga aqbaleen ugana tanaasuleen Mayor/ku xigeenkii walaahoodii Ciise si ay uga bogsadan xurguftii doorashada oo ay ka cabaanyen.
Hase yeeshe cadkaa GOBANIMO ee loo fidiyey waa ay ku gacanseydhay beeshii cabanaysay. Wasiir duur oo filayey in arintu ay halkaas ku dhamaato oo lagu kala ducaysto ayaa arinkaa qaadan kariwaayey ka dib sidii dawladnimadu ahayd amar ku bixiyey in qaswadaayaasha magaalada Saylac laga saro ciidankana ku amaray inay nabadda ilaliyan.Waxana uu waraysigii isla VOA da ku sheegay in Nababadda iyo amaanka Degmada aanay cidna marti ugu ahayn ee ay khasab ku tahay dawladda inay gudato wajibka ka saran amanka degmada iyo dalkaba guud ahaan.
Waxa la filayey in xukumadda Hargaysana ay kaliya taageerto go,aanka wasiirka arimaha gudaha ee caalamka iyo warbahinta aduunka oo dhan Wasiirku gaadhsiiyey in xalka sidas yahay.Hase yeeshe ma dhicin in xukumadii Hargaysa ay go,aankaas taageerto wasiirka Gudaha iyo Amniga ee waxa lasoo ababulay wafdi kale oo ka kooban wasiiro SACAD MUSE ah oo kala ah Abiib Timcad iyo Cadami oo la dhiig baxa SACAD MUSE madama anu beel weyn ka soo jeedin(Ugaas labe).Wasiiradaas oo lo soo diray inay Go,ankii Wasiir duur kala tuuran isla markaana arinta ay dib usoo bilaabaan.
Waxana isla markii ay Saylac soo gaadheenba ay la kulmen beeshii Cabanaysay kuwasoo shuruudo hor leh oo la islii ogaa bedka soo dhigay.Hadana waxay u yimaadeen Beeshii heshay aqlabiyadda ee Mayorka Xuseen Idle ka soo jeeday iyagoo xusay in shuradaha cusub ee ay beeshu doonaysaa ay sidan yihiin kuwa aan meeshaba oolin.
Arinta Saylac mayor iyo cabasho doorasho ka weyn.
Arimaha doorashadii degaankii 2 bilood ka hor ayey dhamaadeen cid cabanysay iyo cid guulaysatayba waa lagu kala hagaagay dhaman 23 degmo ee dalka oo Xisbigii guulaysatay ee aqlabiyadda helay ayaa qaatay Mayorki.Hadii ay cabashooyin jirenna xisbiyo ayaa kala cabanyey ee beel beel ka cabanysay ma jirin iyo beel looga ergaynayey beel kale inay uga tanasusho natiijadii doorashada ee guusha ku raacday.
Hase ahaatee waxa Hargaysa ka bilaabmay wax ka duwan cabashooyinka caadiga ee dalka oo dhan ka jiray doorashadii ka dib.Waxa Hargaysa Yimid wafdi culus oo ka socda Jabouti ila Ethopia oo BEEL ka socda BEELNA Dacweynaya ,,BEESHA DHEXANA ku beerlaxawsanaya inay maanta u hiiliyan madama ay beeshooda hore ugu soo hiiliyeen wakhtigii ay halganki SNM ku jiren.
Waxa Codsigii markiiba jawaab ka bixiyey oo horbooday Madaxdii SACAD MUSE ee xukumadda oo uu horgale uu hayey ina BIIXI
waxana casuumado aan lo kala hadhin oo ka dhacay Hargaysa uu af buuxa INA BIIXI ku yidhi ,,”Beesha ciise abaal weyn ayey inagu leeyihiin waa kuwii biyaha in daba siday wakhtigi dagalki SNM. sidaa awgeed wa inan u hiilina maanta beesha Ciise oo gar iyo gardaraba an fulinaa codsigooda.”
Si codsigooda loogu fuliyo waxa INA Biixi iyo xukumaddu soo ababuleen wafdi balaadhan oo ka kooban Golayaasha iyo 6 wasiir iyo madaxweyne ku xigenkii dalka iyo Xaaji Cabdi Waraabe.
Dhibtii iyo dhagartii iyo dhimashadii Borama ka dhacady malinta wa la ogyahay ku sii dheeranmayo.
Inkastoo wafdigii Ina Biixi ay dhimasho iyo dhawacba u gaysteen dhalintii Borama ,,hase yeeshe hadafkoodi ma fulin oo waa la horjoogsaday malintas.
Arintii ilaa malinta 2012 ila imika way socota ,,waxana saacadan an joogno arintaa u fadhiya oo ku arinsana Jabouti wafdi ka socda labada reer iyo labada xukumadood ee Jabouti iyo Hargaysa ,,Go,aan kasta oo halkas lagu gaadhaa mid la SHAACIYO iyo mid SIR ahba waxa uu kaliya fulinayaa go,aankii Ina Biixi ee SACAD MUSE ee xukumadda Siilanyana ay ku taageertay oo aha in beesha CIISE mulkiyadda dhulka xeebta ee Saylac iyo Lughaya magacooda lagu qabsado manfaceedana SACAD MUSE Qaato MADAMA BEESHA CIISE MAGAC MOOYANE AANAY MANFAC UGA UBAHNAYN Xeebahaas Saylac iyo lughaya.
Dhowr bilood ka hor doorashada ayaa la bilabay ololahan ,,waxanad ogtihiin in Cuqaal SACAD MUSE ay af buuxa ku sheegeen shir ay ku qabteen Hargaysa in Xeebta Saylac iyo lughaya aanu haba yarate Gadabuursi wax degaan ah ku lahayn.Waxanay isku raaceen i xeebta Saylac iyo Lughaya ay is gaadhan oo ay wada degan yihiin Mamaaasan( Ciise) Iyo Sacad Muse(H/Awel).
Sheegashada beenta iyo ololahasi waxa uu socday ilaa muddo dheer oo ka soo bilabanta 1980s ilaa imika.1991 markii SNM ay soo gashay dalkana waxa saylac iyo lughaya qabsaday ciidan beleed sooc ah oo ka kooban SACAD MUSE .Ciidankas oo haystay xeebta ilaa 1993 markaas oo Madaxweyne Cigal khasab kaga kaxeeyey .
Dhamaan Mayorada Saylac lama dooran jirin e waxay ahayeen kuwa lagu sharfo beesha Ciise ,,hase yeshe doorashadii ugu horaysay e tartanka loo galay golaha deganka waxa ay ahayd doorashadii dhawan dhacday oo bedka soo dhigtay tirada beeshaas .Waxay doorashaasi kentay in Gadabuursi xeebta Saylac iyo Lughaya uu yahay aqlabiyad aan lo bir dhigi karin.Waxana doorasahadani ay masaxday beentii iyo sheegashadii labada beelood Sacad muse iyo mamaasan ay mudada badan ku soo caano maleen.
Inkastoo Somali iyo aduunkuba ogaaday xaqiiqada dadka iska leh aqlabiyadda degaanka xeebta saylac iyo lughaya ,,hadana arinkaasi waxa uu ku noqday labada Reer (SACAD MUSE iyo MAMAASAN) qaadanwaa iyo af kala qaad.Waxay MICIIN MOODEEN hadda in Taladii Hargaysa laga so wareejiyo oo Jabouti lagu wada tashado oo labada xukumadood iyo laba beeloodba ay xaduudihii CAALAMIGA ahaa la isku furto oo la is gaashanbuuraysto si Jiritanka beelaha Gadabuursi khatar lo galiyo.
Waxa dhamanba meesha laga saaaray mamulki S/Land ee la wada dhistay ,,waxana la laalay xeerarki doorashada ee beesha Samaroon ku heshay aqlabiyadda doorashadii ka dhacday dalka.
Hadii laba dal dawaladahoodii iyo awoodoodii lo adeegsanayo qoomiyadda Gadabuursi si looga tirtiro degankoodi xeebta ,,Qoomiyaada Gadabuursina waxa khasab ku ah in awoodeeda iyo taladooda ay isku gayso si ay isku badbadiso.
Qoomiyadda Gadabuursi kaliya ma degana S/Land iyo Jabouti ee waxa ay degantahy dagantahay dalweynsha Ethopia oo xirir qoto dheer iyo taariikh ay la wadagan dadka ku nool haday tahay Somali iyo qoomiyadaha kaleba.
Sida aad xukumdaa Jabouti iyo Hargaysa ay isku kaashanayaan ayaa Gadabuursi iyo Xukumadda Ethopia ay isku kaashan doonaan si jiritaanka Qoomiyadda Gadabuursi looga badbaadiyo xulufada shaydanka.
Dalka Ethopia qoomiyadda Gadabuursi waxay ku leedahay xiriir qoto dheer dhaman qoomiyadaha Ethopia iyo soomaalidaba.
Beesha Absame (Darood ) ee ugu awoodda badan maamulka Somalida waxa naga dhaxeeye xirir walaalnimo oo soo jiren ah.
Waxana ay u bahanyihiin xeebo iyo dekado la isku halayn karo sida kuwa Gadabuursi ee Saylac iyo Lughaya.Maamulka kedinka Somalidana waxan ku leenahay madax iyo kadir shaqaale oo aqoon sare leh oo runtii hawlahaa maamulka ,Waxbarashada ,Beeraha
caafimaadka iyo dhaman adegga bulshada iyo ciidamada ,Siroonka intaba ku jira.Kuwasoo an adeegsan karo maalinta an u baahano ee jiritankayagu khatar galo.
Dawladda dhexana waxan ku leenahay Xildhibaano ,safiiro iyo madax ka shaqeeya hayadaha dawliga sida ciidamada ,sir doonka ,Waxbarashada Dhakhaatiir ,Injeero oo kasoo qalin jabiyey jaamacadha Dalka iyo dibadaba oo dalka Ethopia ka shaqeeya dhamantood.Deganka Gadabuursi ee Ethopia waxa ku nool 500.000 dad ah oo ka badan Dalka Jabouti ,,waxana ku yaal 24 High School oo fulin kara tababaro deg deg ah.
Waxa intaa dheer waxa Ethopia ku nool oo jooga UGAASKA GADABUURSI magalada Jigjiga oo xirir Fog la leh dalka Ethopiaoo uu awoowyaashii ka dhaxlay sida( UGAS DOODI 1940 – ILA UGAS NOUR 1885 ).
Ugaasyadaas oo kalin sare kaga jira talada Ethopia.Waxaana taasi ka markhaati ah marki Ugaas Cabdirashiid tagay Ethopia 2010 sida loogu soo dhaweeyey Ethopia oo aad u maqam saraysay.
Hadii Ugas Cabdi Rashiid xukumdaa Ethopia u sheego in dadkisii ay khatar ku jiran o ay labo maamul oo Hargaysa iyo Jabouti ay dhib ku hayan oo ubaahan in laga badbaadiyo dabcan codsigas si deg deg ah ayey ufuliyan Ethopia..
Haddaba walaalayaal awoodaha an kor ku soo sheegnay iyo taladaas waan adeegsankarna marka lo baahdo ,lakiin weli wax baan xeerinaynaa.Welina sidiina xaduudaha kama anan talaabin.Waanse talabi doonaa hadii ay naga fursanweydo.
Hadddise laga waan toobi wayo jidka xun ee is xulufaysiga ,,khasab ay noqon doonta inan is badbaadino.
Runtii Isaaq o dhan ma eedaynayo cidda arinKAN hor boodaysaa waa SACAD MUSE (H/AWEL).
Lakiin Tolku waa kiI isqabta ee runta isku sheega tas ma hayno.
Ta labaad mamulkii S/lAND ee an idin la dhisnay 20 ki sanadood ee ugu dambeeyey from 1993 shirki borama ila imka ,markii uu taabo galay in la noo adegsado nalagu tirtiro ma gar baa baa ISAAQOW?
Kaaga darane in weliba Dawladda Jabouti la is xulufaysto oo SACAD MUSE Dawalad iyo dal Kale loo hiiliyo meesha ma qabataa?
SACAD MUSE wixii dhib iyo dhagar iyo gawrac u gaystay DAD SAFAR ah iyo kuwa HURDA oo GADABUURSI (Dadqalato)
Ma raganimuu u haysta? Waa Gunnimo Gayiga somaliyeed u kow ah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SACAD MUSE /Galbeed ee JABOUTI ku tarmay waxa keenay ABTI iyo Habar/Yar oo GADABUURSI ah ,,ABAALKODII ma wax uu noqday NACAYB IYO CADAWAD LA MID AH sida Tutsi & Hutu?
wakhtigii UGAASYADA SACAD MUSE Galbeed AMAANKOODA WAXA DAMANAD QADAY UGAASKA GADABUURSI…,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2010 Booqashadi Ugaas Cabdirashid e Borama dhibkii ay gaysteen SACAD MUSE GALBEED
NIN RAG AHI WAA OGYAHAY NACASNA LO SHEEGI MAYO.!!!!!!!!!!!!!!!!
ILAAHAY HA IDIN SOO HADEEYO SACAD MUUSE GALBEDOW.
« Gadabuursow noqonmeyso beerka jecliyaa xeydha jecliyaa ee kala doorta Saylac iyo Somaliland
Sir Ma Qabe Allaa U Sahan Ah, Heshiis​kii Ismaaciil Cumar Geele Iyo Habarawal Oo Fashilmay »